ikhaya » imisebenzi » Umlingene wobunjineli
UYobhi Ukuvula: Uhlobo lobunjineli
indawo: Umlingene wobunjineli
inkampani: IsiXeko neNxweme yaseSan Francisco
Indawo: San Francisco CA US
Izikhundla zangoku zifumaneka kwiSebe leMisebenzi yoLuntu, iSikhululo soMbane, iGunya loThutho loMasipala, kunye neKhomishoni yeeNkonzo zoLuntu zaseSan Francisco. Uluhlu olufanelekileyo olubangelwa kulo mviwo lunokusetyenziswa kwizikhundla ezizayo kwiklasi enye kwamanye amasebe eSixeko
Ngaphansi kolawulo jikelele, i-Associate Associate yenza umsebenzi obunzima wobunjineli wobugcisa ekulungiseleleni ubambiswano (kubandakanywa isakhiwo kunye / okanye ukuthutha), okanye imifanekiso yombaneli kunye noomatshini kunye nezinye izinto ezibonakalayo usebenzisa imveliso yesoftware ye-computer efana ne-Revit, kunye nokusebenza Ngokuchanekileyo kwaye ngokuhambelana nemigangatho yokuyilwa, kwaye wenza enye imisebenzi ehambelana nayo njengoko kufuneka.
Ngokuxhomekeka kwendawo ekhethekileyo / uqeqesho, ilungiselela uluntu (kubandakanywa isakhiwo kunye / okanye ukuthutha), okanye imifanekiso yombaneli, okanye izakhiwo zobunjineli kunye nezinye izinto ezibonakalayo usebenzisa i-AutoCAD, Imephu ye3D, i-Civil 3D kunye / okanye i-Revit; Uphando uphando lwezobunjineli kwaye uqokelele kwaye ubale idatha yenkalo / yesebe ukulungiswa koyilo kunye nemidwebo; Yenza uhlolo lokuqala kwaye uhlolisise amaxwebhu obunjineli kunye nemidwebo yokuchaneka, ubunelulwazi ngokwaneleyo, kunye nokuhambelana nemimiselo nemigangatho; Uncedisa ekulungiseni iindleko kunye nobungakanani bemilinganiselo yeeprojekthi zogunjine, iinkcukacha zeprojekthi kunye neengxelo ezibhaliweyo, kunye nophando lweewebsite; Iinkqubo kunye / okanye ukuphononongwa kweemali ezivela kwiikontraki, izibonelelo kunye nabanye; Iindleko, ukuvelisa kunye nokugcina amaxwebhu obunjineli agcinwe kwiinkcukacha zolwazi okanye ama-spreadsheets kwifom yekopi ekhuni; Isebenzise imathematika kunye nezinye izixhobo zobunjineli njengoko zifunwa kwiklasi yokwenza umsebenzi; Isebenza kwaye ithathe indawo yabeendaba (oko kukushicilela iikharriji, iphepha lokubhala kunye nephepha lokushicilela) kwizixhobo ezisetyenziselwa ukuqhuba umsebenzi; Uyaphendula ngomlomo kwaye ebhaliweyo kwifomu, imibuzo, izikhalazo, kunye nezicelo zolwazi oluvela kuluntu jikelele, iikontraka kunye nezinye i-arhente; Izicwangciso, izabelo, iishedyuli, zongamela, zihlola kwaye zivavanya umsebenzi wabasebenzi abangaphantsi; Ilungiselela iingxelo ezibhaliweyo, imizuzu, iibhalelwano, iingxelo zentsimi kunye neenkcukacha ngexesha lokuqhuba umsebenzi; Uncedisa ekwenzeni inkundla kunye nokuhlola izixhobo; Wenza umsebenzi wokuyila usebenzisa ulwazi lobunjineli kunye neenkqubo ezifanelekileyo zeprogram; Ichaza kwaye iqinisekise iinkqubo kunye nemigangatho yokuyila; Igalelo ekuphuhlisweni kwemigangatho yenkxaso yekhompyutheni kunye noyilo (CADD).
Ummiselo unokufuneka ukuba uqhube isithuthi ukuya kwiindawo ezahlukeneyo zomsebenzi.
1. Iminyaka emine yokuqinisekiswa kwendawo yoluntu (kubandakanywa isakhiwo kunye / okanye ukuthutha), okanye ugesi, okanye oomatshini bezobunjineli zobunjineli bezobugcisa basebenzisa iiprosoft software ezixhaswa yikhompyutha, njenge-AutoCAD, iMephu 3D, i-Civil 3D kunye ne-Revit, ukulungiselela imidwebo yobunjineli kunye nezinye izakhiwo zobunjineli Impahla, ubuncinane ubuncinane kwiminyaka emibili ekufuneka ibe yinto efana neyo-Class 5362 Engineering Assistant. Eli thuba kufuneka lifunyenwe kwiminyaka esixhenxe yokugqibela;
2. Ukuthengwa kwelayisenisi yokuqhuba ngokusemthethweni eCalifornia.
Indawo: Abaviwa bangathatha indawo yeSatifikethi sokuFomelwa ekuqulunqweni okanye ekwakhiweni kweekhompyutheni ezixhaswa kwiikholeji ezivunyelweyo okanye isikolo sobugcisa / isikolo soqeqesho kwiinyanga ezintandathu zeminyaka efunekayo yamava.
Iimfuno ezizodwa: Iimfuno ezikhethekileyo ezihambelana nezikhundla eziza kuzaliswa ziyahlukahluka kwiimfundo ezisemgangathweni ezisemgangathweni ezinxulumene naloluhlu. Ezinye izikhundla zifuna ukufumana amanye amava afana nawo:
Unye (1) unyaka (okanye ngaphezulu) wamava usebenzisa i-software ye-Revit software ukulungiselela
Imidwebo yobunjineli kunye nezinye izinto zobugcisa zobunjineli
Unyaka (1) unyaka (okanye ngaphezulu) wamava usebenzisa i-AutoCAD, i-Civil 3D kunye / okanye i-MAP 3D izicelo zesofthiwe ekulungiseleleni
Imidwebo yobunjineli kunye nezinye izinto zobugcisa zobunjineli.
Abafaki-sicelo kufuneka bahlangabezane neemfuno eziyimfuno eziyimfuneko ngomhla wokugqibela wokufakela ngaphandle kokuba kuphawulwe ngenye indlela.
Abafake izicelo bangafuneka ukuba bangenise ukuqinisekiswa kwemfundo efanelekileyo kunye namava nangaliphi na ixesha ngexesha lokuqesha nokukhetha. Ukuba ukufundwa kwemfundo kuyadingeka, ulwazi malunga nendlela yokuqinisekisa iimfuno zemfundo, kuquka ukuqinisekiswa kweemali zemali zangaphandle okanye ukulingana kwezinga, kuyafumaneka Sfdhr.org/index.aspx?page=456
Phawula : Ukukhohlisa imfundo, ukuqeqeshwa, okanye amava omsebenzi okanye ukuzama ukukhohlisa kwisicelo kunokubangela ukungafanelanga kulo msebenzi kunye namathuba emisebenzi esizayo ngeSixeko kunye neNxweme yaseSan Francisco.
Izicelo zoMmandla weSixeko kunye neNgingqi yaseSan Francisco zamukelwa kuphela kwinkqubo ye-intanethi. Tyelela Www.jobaps.com/sf Ukubhalisa i-akhawunti (ukuba awukwenzi oko njalo) kwaye uqale inkqubo yokwenza isicelo.
Khetha ukwamkelwa komsebenzi oyifunayo
Khetha "Faka isicelo" kwaye ufunde kwaye uvume ulwazi
Khetha okanye "Ndingumsebenzisi omtsha" ukuba awunabhaliswa ngaphambili, okanye "Ndibhaliswe ngaphambili"
Landela imiyalelo kwisikrini
Iikhomputha ziyafumaneka kuluntu (ukusuka kwi-8: 00 ukuya ku-5: 00 ntambama ngoMsombuluko ukuya kuLwesihlanu) ukufaka izicelo ze-intanethi kwi-lobby ye-Dept. yabasebenzi kwi-1 South Van Ness Avenue, kwi-4th Floor, eSan Francisco.
Abafake izicelo bangaqhagamshelana ne-imeyile malunga nalesi simemezelo, ngoko ke, luxanduva lwabo ukuqinisekisa ukuba idilesi yabo ye-imeyile ebhalisiweyo ichanekile kwaye igcinwe ngokukhawuleza. Kwakhona, abafake izicelo kufuneka baqinisekise ukuba i-imeyile esuka kwiCCSF ayinqatshelwe kwikhompyutheni yabo ngesihlungi segaxekile. Ukuthintela ukuvimba, abafakizicelo kufuneka bamise i-imeyile yabo ukuba bamkele i-CCSF imeyile kule dilesi elandelayo (@ sfgov.org, @ sfdpw.org, @ sfport.com, @ flysfo.com, @ sfwater.org, @ sfdph.org, @ Asianart.org, @ sfmta.com, @ sfpl.org, @ dcyf.org, @ first5sf.org).
Abafaki zicelo baya kufumana i-imeyli yokuqinisekisa ukuba isicelo sabo se-intanethi senziwe ngokuphendula kuzo zonke izibhengezo abazifake kuyo. Abafaki-sicelo kufuneka bagcine le imeyile yokuqinisekisa kwiirekhodi zabo. Ukungaphumeleli ukufumana le imeyile kuthetha ukuba isicelo sokungena kwi-intanethi asizange sithunyelwe okanye senziwe.
Wonke amava omsebenzi, imfundo, uqeqesho kunye nolunye ulwazi olubonisa ukuba uhlangabezana neziqinisekiso ezincinci kufuneka zifakwe kwisicelo sakho ngethuba lokugqibela lokuthumela. Iinkcukacha ezithunyelwe emva kokuba umhla wokugqibela wokufowunelwa awuyi kuqwalaselwa ekuqaliseni ukuba uhlangabezana neziqinisekiso ezincinci.
Izicelo ezizaliswe ngokungafanelekanga zingabangela isizathu sokungagunyaziswa, ukungafanelekanga okanye kunokukhokelela kumanqaku aphantsi.
Ukuba unemibuzo malunga nale nkqubo yokuqeshisa okanye isicelo, nceda uqhagamshelane nomhlalutyi wokuhlola, uCarlos Cervantes ngocingo kwi-415-554-2416, okanye nge-imeyile Ccervantes@sfwater.org .
Uviwo olubhalwayo (Isisindo - 100%)
Abaviwa abahlangabezana neziqinisekiso ezincinci baya kumenywa ukuba bathathe inxaxheba kwi-oviwo olukhethiweyo lokuzikhethela ukuba bafumane ulwazi lwabo, izakhono kunye nobuchule kwiindawo ezinxulumene nemisebenzi enokuthi zibandakanye, kodwa azikhawulelwanga kuye: ulwazi lweendlela zokubhala, imigangatho, Ukutyunjwa, kunye neempawu; izakhono zokunxibelelana; Ukukwazi ukwenza ulungiso lwekhompyutheni olusetyenziswayo usebenzisa izicelo zesofthiwe ekulungiseleleni imidwebo; Kunye nokukwazi ukusebenzisa imisebenzi yemathematika ukusombulula iingxaki zokuyila, ukuyila, ukwakhiwa, kunye nokulungisa.
Olu luvavanyo olumiselweyo, ngoko ke, ngokuhambelana noMgaqo-nkqubo weNkonzo kaRhulumente 111.11.4, imibuzo yokuvavanya kunye nezimpendulo zokuvavanya azifumaneki ukuhlola okanye ukuhlaziywa luluntu.
Umhla woviwo: Abafaki-zicelo abadibana neNgcaciso eMfutshane baya kwaziswa ngolwazi oluchanekileyo, ixesha kunye nendawo yokunika ingxelo kwiimviwo.
Amanqaku okupasa kufuneka aphunyezwe kwiMviwo eBhaliweyo ukwenzela ukuqhubeka kwinkqubo yokukhetha.
Phawula: Abafaki zicelo abahlangabezana neemfundo ezincinci abaqinisekanga ukuba baqhube phambili kuwo onke amanyathelo kwinkqubo yokukhetha.
yokuqinisekisa: Umgaqo wesatifikethi sokwenza uluhlu olufanelekileyo olubangelwa kulo mviwo luya kuba yiMigaqo yee-7 izikolo. Iinkqubo zokhetho ezongezelelweyo zingaqhutyelwa liSebe eliqeshayo ngaphambi kokuthatha izigqibo zokuqeshisa.
Uluhlu olufanelekileyo: Uluhlu olufanelekileyo olubangelwa kulo mviwo luya kutshintshwa emva kokumkelwa (umz., Ngenxa yezibheno), njengoko kuqondiswe nguMlawuli wezeNtloko okanye iKhomishini yeNkonzo kaRhulumente.
Ubude boluhlu olufanelekileyo olubangelwa kule nkqubo yeemviwo luya kuba ngeenyanga ze-12, kwaye luyakwandiswa ngokuvunyelwa nguMlawuli wezoLuntu.
Njengomgqibelo womsebenzi, uza kuba neminwe, kwaye iminwe yakho izothunyelwa kwiSebe lezoBulungisa lase-California (DOJ) kunye ne-Federal Bureau of Uphando (FBI). Ingxelo ebangelwa yimbali yakho yecala (ukuba ikhona) iya kusetyenziswa ukuchonga ukuba uhlobo lwenkohlakalo yakho (okanye ukuboshwa, kwiimeko ezincinci) kuxabana nemisebenzi ethile kunye noxanduva lomsebenzi onokugqibela. Ukuba kukho ukungquzulwano, uya kucelwa ukuba ubonise naluphi na ubungqina bokubuyiselwa kokunciphisa ukungquzulwano, ngaphandle kokuba imimiselo yomgaqo-nkqubo okanye imimiselo yomhlaba ibha kwiimeko ezithile, njenge:
Abaviwa abafake izicelo zeendawo kunye neSithili saseNyunithi yeSithili kunye neNkundla yeKholeji yasekuhlaleni bayakufaneleka ukuba baqwalaselwe xa imbali yabo yokukholelwa ingayithobeli imigangatho esekelwe phantsi kweKhowudi yaseKalifornia.
Abaviwa abenza izikhundla ngeSebe loLonwabo kunye neSebe lePaki banokuthi bangakufanelekanga ekuqwalaselweni xa imbali yabo yokukholelwa ingayithobeli imigangatho esekelwe phantsi kweCalifornia yeRadio Code Resources 5164.
Ukuba nomlando wokugweba awukuthinteli ngokuzenzekelayo ukusuka emsebenzini kunye nesiXeko.
Ukuba ukhethwe njengomgcini wokugqibela, isebe eliqeshwayo liya kuqhagamshelana nawe ukucwangcisa ukuqeshwa kwamanqaku.
Bonke abasebenzi beSixeko kunye neNxweme yaseSan Francisco baqeshwe ngabasebenzi beNtlekele kwiSebe likaRhulumente kunye nomthetho wasekhaya (iKhowudi yaseKhowudi kaRhulumente yeCandelo le-3100-3109). Ingqesho kunye neSixeko idinga ukuqinisekiswa kokunyaniseka kwesi sifungo. Abaqeshwa bafuneka ukuba bazalise uqeqesho oluxhomekeke kumsebenzi woNcedo lweeNtlekele njengoko linikezelwe, kwaye babuye emsebenzini njengoko kulandelwe xa kwenzeka imeko engxamisekileyo.
Amalungelo okuBhengezwa kunye neNkundla yeziBheno
Abafaki-sicelo kufuneka bahokelwe kuphela ngamalungiselelo alesi sivakalisi, kubandakanywa iimfuno, amaxesha kunye nezinye iinkcukacha, ngaphandle kokuba ziphakanyiswe yimithetho yombuso, welizwe okanye yasekhaya, ilawula okanye imigaqo. [Qaphela: Ukulungiswa kwamaphutha okubhaliweyo kwisibhengezo kunokuthunyelwa kwiSebe lezeLuntu kwiwebhusayithi Www.jobaps.com/sf .] Imimiselo yale saziso ingafowunelwa phantsi kweNkcazo ye-Civil Service 110.4. Izibheno ezinje kufuneka zithunyelwe ngokubhaliweyo kwiSebe lezoLuntu, i-1 S Van Ness Avenue, i-4 th Floor, iSan Francisco, CA 94103-5413 ngokuvalwa kweshishini ngomhla we-5th emva komhla wokukhutshwa kwesi simemezelo soviwo. Iinkcukacha malunga nezinye iikhomishoni zeeNkonzo zeeNkonzo zikaRhulumente ezibandakanya izipapasho, izicelo kunye nemigaqo-nkqubo yeemviwo, kuquka nomenzi wesicelo sobheno, inokufumaneka kwiwebhusayithi yeKhomishoni yeNkonzo yoLuntu Sfgov.org/civilservice/rules .
Ulawulo loKhuselo loKhuseleko (TSA) UkuSula ukuKhuseleko:
Abaviwa abafumana umsebenzi kunye neKhomishini yeSigqeba saseSan Francisco bafuneka ukuba banikezele ngembali epheleleyo yengqesho kwiinyanga ezilishumi ezedlulileyo (i-10) kunye nenkcazo yazo zonke ikhefu emsebenzini ngexesha lelo xesha. Iminyaka elishumi edluleyo (i-10) yeminyaka yengqesho yomviwa iya kuqinisekiswa. Ukongezelela, abaviwa baya kufuneka ukuba bangene kwisheke somlando wezobugebengu, kubandakanywa neFBI zeminwe, ukuze kuqinisekiswe ukufaneleka kwemvume yokukhusela kwaye kunokufuneka ukuba uhlolwe izidakamizwa / utywala. Ikhomishini yeNkonzo Yombutho IsiGaba seSiqendu 110.9.1, bonke abafake izicelo zoviwo kufuneka bahlale kunye nokugcina iziqinisekiso ezifunwa ngumthetho kunye nesaziso sokwenza iimviwo. Ukungaphumeleli ukufumana nokugcina imvume yokukhusela isisiseko sokupheliswa komsebenzi kwiKhomishoni ye-Airport.
Ukususwa ozenzele kona:
Abaviwa abafumana umsebenzi kunye neKhomishoni yeSigqeba saseSan Francisco kufuneka bafumaneke ukufumana ukungena kwi-San Francisco International Airport. Isicelo se-US Custom Access Seal singeniswa kwiStofu KUPHELA emva kokuba umsebenzi uqalile. Ingqesho kule ndawo idinga ukuba umntu ofanelekileyo angenise isicelo, afumane ngempumelelo kwaye agcine iSial Access Seal. IKomishini yeNkonzo yeeNkonzo zomThetho I-110.9.1, bonke abafake izicelo kufuneka bafumane kwaye bagcine iziqinisekiso ezifunekayo ngumthetho kunye nesaziso sokwenza iimviwo kulo mviwo. Ukungaphumeleli ukufumana okanye ukugcina ukufikeleleka kwamasiko, imfuneko yesi sikhundla, kunokusisiseko sokuphelisa umsebenzi kwiKhomishoni ye-Airport. Iimfuneko zokufikelela Iimfuno kunye neenkqubo zokucanda izicwangciso zifumaneka kwiMigaqo yeMigaqo yeSizwe, i-Title 19, Icandelo 122, iCandelo 181 okanye i-189.ment yoviwo. Ukungaphumeleli ukufumana nokugcina imvume yokukhusela isisiseko sokupheliswa komsebenzi kwiKhomishoni ye-Airport.
Ulwazi olubanzi malunga neSixeko kunye neNgingqi yaseSan Francisco Inkqubo yeNgqesho kunye neenkqubo:
Ulwazi olubalulekileyo lweNgqesho kwiSixeko kunye neNgingqi yaseSan Francisco lunokufumaneka Sfdhr.org/information-about-hiring-process Okanye ikopi elukhuni kwi-1 South Van Ness Avenue, kwi-4 th Floor.
Iikopi zeeSicelo zoMqulu:
Abafaki zicelo kufuneka bagcine iikopi zazo zonke iincwadi ezifakiwe, njengoko ezi ziza kubuyiselwa.
Bonke abantu abangena kwiSixeko kunye neNxweme yaseSan Francisco abasebenzi kufuneka banikele ukuqinisekiswa kwegunya lokusebenza eUnited States.
Abafakizicelo abakhubazekileyo abanokuhlangabezana neemfuno ezifunekayo zokufaneleka kwezi mvume zengqesho bangafumana ulwazi ngokucela i-ADA efanelekileyo yokuhlala kwi:
Ulwazi malunga nezicelo zoLuthando lwabaVeterli lunokufumaneka kwi:
I-Senior Credit Credit kwiimviwo zoPhuhliso:
Ulwazi malunga nekhredithi ye-seniority ingatholakala kwi:
Uhlobo loviwo: CPE
Ikhutshiwe: Ngamana 18, 2017
Umlawuli wezeMithombo yoluntu
Inombolo yesazisi: I-CBT-5364- 901711
I-PUC / CC / 415-554-2416
Bonke abasebenzi abaqashiweyo okanye emva koJanuwari 10, i-2009 iya kufunwa (ngokulandela iSan Francisco Charter Section A8.432) ukunikela i-2% yembuyekezo yokuhlawula irhafu ngaphambi kokuba ixhaswe ngempilo. Ukongeza, uninzi lwabaqeshwa kufuneka ukuba benze ilungu lenkxaso kumhlala-phantsi, ukusuka kwi-7.5% -13.25% yembuyekezo. Ukufumana ulwazi olongezelelweyo ngale miqathango, nceda uqhagamshelane ne-ofisi yabasebenzi ye-ejensi yokuqesha.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga neenzuzo, nceda nqakraza apha.
SoftAtHome, MStar, iCES2017	2017-05-21
Previous: Ukugcinwa okuManyeneyo kulula ukusetyenziswa kweeV18 ezinamandla ene-VN 360 °
next: Injineli yeVidiyo yeZiko (iBlue Sky Studios)
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Uhlobo lobunjineli". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/engineering-associate-i/. Enkosi.